Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.3.2.7 Sensitive
Mamwe mashoko kuti makambani uye hurumende vane inonyatsoziva.
Makambani Health inishuwarenzi kunge kwemashoko akazara pamusoro marapirwo vakagamuchira makasitoma avo. mashoko aya anogona kushandiswa pakutsvakurudza chinokosha nezvoutano, asi kana zvakava pachena naro Tingangonyanya kutungamirira kukuvadzwa mupfungwa (semuenzaniso, kunyara) uye zvoupfumi kukuvadza (semuenzaniso, kurasikirwa nebasa). Kure nevamwe, vakawanda huru mashoko mabhuku vane ruzivo kuti inonyatsoziva. The kunzwa hunhu kwemashoko iri chikamu chikonzero kuti guru mashoko manyuko vanowanzoshamiswa dzisingambosvikiki (zvataurwa pamusoro apa).
Imwe nzira iyo vatsvakurudzi vanoedza kugadzirisa dambudziko iri kuti de-kuziva datasets kuti tisanzwe mashoko. Asi, sezvo Ndicharatidza zvakadzama muChitsauko 6 (Ethics) izvi zvakakomba zvakawanda nenzira dzisina nevakawanda kukosheswa zvose magariro masayendisiti uye mashoko masayendisiti.
Mukugumisa, huru mashoko manyuko nhasi (uye mangwana) kazhinji vane unhu gumi. Vakawanda zvivako-guru zvakanaka, nguva dzose-mberi, uye nonreactive-dzinobva chokwadi muna digitaalinen zera makambani nehurumende vanogona kuunganidza mashoko ari chikero kuti zvakanga zvisingaiti kare. Uye, vakawanda vakaipa zvivako-kukwana, dzisingambosvikiki, asiri mumiririri, kukukurwa, algorithmically chikavhiringidzwa, dzisingambosvikiki, tsvina, uye hunorangarira-zvinobva ndechokuti mashoko haisi inounganidzwa nokuda nevatsvakurudzi nokuti vanotsvakurudza. Kunzwisisa unhu izvi ndizvo zvakafanira danho rokutanga kudzidza kubva mashoko makuru. Uye, zvino tava kutendeukira kutsvakurudza nzira tinogona kushandisa mashoko ichi.